Iyo Ibex inodarika mapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matatu: ndeapi maseru ekupinda? | Ehupfumi Zvemari
Chekupedzisira, iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yaunza pasi yakasimba simba tekinoroji rutsigiro iyo yaive nayo kwemwedzi yakati wandei pa9.300 mapoinzi. Kwave kuri kuyedza kwesimba kunofanirwa kutariswa nevashambadzi vadiki nepakati kuti vaite mabasa avo pamusika wemari. Nekuti kana ichi chikamu chemutengo chikapfuudzwa, unogona kuva nenzira yakajeka kusvika padhuze nemapoinzi zviuru gumi, sekuratidzwa nevakawanda vevanoongorora emusika wemari.
Panguva ino, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kuitira kana chingave chenhema kumusoro kumusoro. Tichifunga nezve mukana wekuti diki yekusimudzira rally haizoitike semhedzisiro yekupfuura yakakosha nhanho iyo yaive nayo pamazana mapfumbamwe nemazana matatu. Naizvozvo, zvichave zvakakodzera kusefa a kusununguka kudarika pakuvhara mitengo pamatanho aya. Zvino hongu, inogona kuvandudza nhanho nyowani yekusimudzira iyo inobvumidza vazhinji vadiki nevepakati varimari kuti vapinde mumisika yemari kuitira kuti mashandiro avo pamusika wemasheya ubatsire.
Zvisinei, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti iyo yekusimudzira yazvino haisi kuzove nesimba mune chero nzira, isina kutoreba. Asi chero zvakadaro, zvichave zvakakodzera kuti utore mukana wayo mukutarisana nekukwanisika kwemitengo yekururamisa iyo inogona kugadzirwa yatove muhafu yepiri yegore. Nguva iyo vaongorori vemusika wemari vasina tarisiro, uye umo kumira kunokwanisika muUS equities kunogona kuenda kunopesana nezvinodiwa nevatengesi. Asi izvi zvichave zvatove muchikamu chechipiri chegore.
1 Ibex 35: zvikamu zvaunofanirwa kunge uri
2 Kuvaka mune yepamusoro
3 Iko kusahadzika kwekusingaperi kwemabhangi
4 Vamwe vanobatsirwa: tekinoroji
5 Simbi makambani ari kuda kutenga
6 Iwo maelectriciki akatoenda kumusoro zvakanyanya
Ibex 35: zvikamu zvaunofanirwa kunge uri
Zano rekutanga ratinofanira kutsanangura kubva panguva dzino chaidzo kujekesa zvikamu zvatinofanira kunge tiri munguva dzino. Nekuti pane zvimwe zvinonzwisisika kupfuura vamwe uye vane hunhu hunogona kunge huri nani kana iwo mapfumbamwe mazana matatu nemazana matatu agumburwa. Iine mukana wekugona kuongorora zvakare izvo iri pakati pe5% ne8%. Ndokunge, kwete kunyanyisa, asi zvinonakidza mukuita kwenguva pfupi. Ndokunge, shure kwezvose, nguva yakakodzera kwazvo yerudzi urwu rwekushanda mumisika yenyika yequity.
Kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakadaro inyaya yakatorwa yekuti kuchave nezvimwe zvikamu zvakaomarara yekutambira kwedu mashandiro mumisika yemari. Uye ndizvo chaizvo kwavari kwatinotungamira mafambiro edu mumwedzi iri kuuya nechinangwa chekuwedzera mari inowanikwa kubva pakutenga mabasa pamutengo wemusika. Saka kuti iwe uve nepfungwa yekutsigira kuita iri zano rekudyara, isu tichaenda kunongedzera kuti ndedzipi nzvimbo dzemusika wemasheya dzinogona kunyatso kuzviita kubva ikozvino zvichienda uye zvisinganetsi.
Kuvaka mune yepamusoro
Hapana mubvunzo kuti rimwe remapoka anogona kuita zvakanakisa muSpanish equities ndeaya akabatanidzwa mukuvaka. Kunyanya, mushure mekupfuura iyo Ibex 35 iyo mwero wemapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matatu uye kuve nenzira yakajeka kusvika kunosvika zviuru gumi zvemapoinzi. Mukati meichi chakakosha chikamu chemusika wemasheya, imwe yehunhu hunopa hwakanakisa hunyanzvi chinhu ACS. Nzombe yayo inomhanya mumisika yemombe iri kukwevera kunyanya kutariswa kwechikamu chakanaka chevamiriri vezvemari vanofunga kuti inogona zvakare kuzvibata zvirinani kupfuura vamwe vese kubva zvino zvichienda mberi.
Kunyange zvakadaro, isu hatigoni kutonga kuti izvi zvinokwira kumusoro zvinogona kusvika kune mamwe masheya mune ino chikamu akanyorwa pane yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35. Semuenzaniso, mune dzimwe nyaya dzeFerrovial uye zvakanyanya kunyanya Acciona iyo inoratidzawo yakasimba kumusoro maitiro ayo anoitirwa nguva dzese dzekugara. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, hakuzovi nemimwe mhinduro kunze kwekuve nechikamu chikuru chemakambani ekuvaka ekuumba yedu inotevera yekudyara portfolio.
Iko kusahadzika kwekusingaperi kwemabhangi
Imwe yenzvimbo dzakanyanya kurohwa mumwedzi yapfuura anga ari mapoka emari, ayo akaona mitengo yavo ichiderera. Chero zvazvingaitika, imwe yekiyi yekuona kuti shanduko yako ichave yakadii kubva ikozvino zvichienda sarudzo yaunoita svondo rino European Central Bank (ECB). Mupfungwa yekuti inogona kuenderera ichipinza mari mumisika yemari. Nekuti dai zvaive zvakadai, vanobatsirwa zvikuru vaizove mabhanga akanyorwa pane Ibex 35.
Izvi zvinogona kuita zvechisimba ne kuongorora kukuru mumisika yemari. Kunyangwe ichifungidzirwawo kuti urefu hwayo hahuzove hwakareba, nekuti zvinopesana inogona kuve yakasimba asi ipfupi mukureba. Naizvozvo, zvichave zvakafanira kuve nekuziva kwazvo kufamba kwese kunouya kubva kuEuropean inoburitsa bhangi nekuti zvinogona kutungamira kune mamiriro ekuti makambani madiki nepakati-epakati anonoka pabasa ravo rekuvhura nzvimbo munzvimbo dzekuchengetedzwa kweaya maitiro. Ndokunge, nerutsoka rwachinja sekutaurwa kwazvinoitwa munzvimbo dzekutengesa dzemisika yezvemari uye vanogona kukuunzira dambudziko rinopfuura rimwe kubva zvino.
Vamwe vanobatsirwa: tekinoroji
Izvo pasina mubvunzo ichava imwe yemapazi ayo anonyatso kumira kunze kweiyi nyowani yekusimudzira mamiriro muSpanish stock stock. Nekudaro, ine dambudziko rakakomba iro mashoma mashoma ekuchengetedzwa akanyorwa pane yenyika inoenderera musika. Kusiyana nedzimwe nzvimbo dzekunze, uko ivo varipo chaizvo. Zvese zviri zviviri muhuwandu uye nemhando yemakambani avo uye kuti chero zvakadaro zvinogona kuva kushamisika kukuru mukati mekota yechipiri yegore. Pamusoro pezvimwe zvikamu zvinotungamira zvemusika wemasheya uye izvo zvinogona kubatsira purofiti kuti igadzirise zvine mutsindo mune chirevo chemari chevashambadzi vadiki nepakati.
Iyo chaiyo huremu hwemakambani eetekinoroji haisi iyo inonyanya kukodzera ita mashandiro kubatsira, asi isu tichafanirwa kuyedza takatarisana nemamiriro ezvinhu matsva ayo anoratidzwa muzvikamu, munyika nepanze. Chero zvazvingaitika, ichave iri yezvikamu zvepamusika wemasheya kune iyo chaiyo yekutarisisa ichafanirwa kubhadharwa mumazuva anotevera. Iine kukosha kwakakosha kwekudzokorora uye mune chero mamiriro ezvinhu pamusoro pezvimwe zvikamu zveyeti yenyika. Kuve inoshamisa cyclical chikamu sezvo iri iripedyo yakabatana nehupfumi hwekutenderera, zvese mune imwe pfungwa uye imwe.
Simbi makambani ari kuda kutenga
Ehe, makambani esimbi ane simba haakwanise kusiiwa mupombi uye kuti akagadzirwa seimwe yezvikamu pazvinofanirwa kuve kamwechete iwo mazinga e9.300 mapoinzi apfuura. Zvisinei nekushomeka kwavo kukuru, izvi zvikumbiro zvinogona kusimuka kukwira kwakamira chaizvo mumazuva mashoma kwazvo. Nekutenda mune imwechete yekutengesa chikamu che3% kana kunyangwe 5%. Kunyangwe iine njodzi yakakomba yekuti kugadziriswa kwayo kwakanyanya zvakanyanya. Hazvishamisi kuti vanopa misiyano yakakura pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi. Kuve unokurudzirwa zvakanyanya pamabasa ekutengesa kana zvakare kugadzirisa iwo pazuva rimwe chete.
Kune rimwe divi, chikamu ichi ndechimwe cheavo vane kugona kukuru kwekugona kwezvose. Iine vamiririri vekukosha kwe Arcelor kana Acerinox icho chingave chinhu chedu mashandiro mukati memazuva ano kana mavhiki. Kunze kwekuti mitengo yekutenga nekutengesa yakagadziriswa zvakanyanya nechinangwa chikuru chekuwedzera purofiti mumabasa anoitwa muzvikwereti. Pamusoro pezve kumwe kufunga kwehunhu hwakarongeka hwakagadzirirwa imwe mhando yehuwandu mune vashoma nepakati varimi.
Iwo maelectriciki akatoenda kumusoro zvakanyanya
Pane kupokana, hatigone kukanganwa kuti makambani mune ino yakakosha chikamu chekambani akatotenda zvikuru mumwedzi yapfuura. Nekukoshesa kweanopfuura makumi maviri muzana uye zvinoita sekunge kuti havasi kuzobatsirwa zvakanyanya kubva muchiitiko chitsva ichi chakapihwa nemusika wemasheya wenyika. Asi pane izvo zvinopesana, kuti vagadzikane mumitengo yavo kana chakanyanya, kuti varatidze kururamisa kweimwe kusimba kubva zvino zvichienda mberi. Kuneta kwavo kuri kuve kujeka mazuva ano uye zvinoita sekunge vasina simba rakaringana rekuramba vachikwira mumatunhu avo emasheya.
Nekudaro, ivo vane kukwezva kukuru kwekuti ivo vanopa yakakwira kwazvo chikamu chemugovano muzvikamu zveSpanish. Nekudzoka pane kusevha kwepakati pe5% uye 7%, kuburikidza nemubhadharo wakatarwa uye wakavimbiswa paakaundi gore rega rega. Mune izvo zvakagadzirwa seimwe yeakanyanya kukurudzira kukurudzira iyi mhando yekutenga mumisika yemari. Muchikamu chinozivikanwa nekuti ndicho chimwe chezvakanyanya kugadziriswa mumusika wemasheya wenyika uye izvo zvinogara zvichigadzira kusagadzikana pakati pevashambadzi vadiki nepakati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo Ibex inodarika mapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matatu: ndeapi maseru ekupinda?